Kitra – Ara-pirahalahiana :: Resin’i Kenya, rehefa tsy nahafaty «Penalty», ny Barea • AoRaha
Kitra – Ara-pirahalahiana Resin’i Kenya, rehefa tsy nahafaty «Penalty», ny Barea
Niondrika teo anatrehan’ny ekipam-pirenen’i Kenya na Harambee Stars tamin’ny alalan’ny isa 1 noho 0, ny Barean’i Madagasikara tao amin’ny kianjan’ny Robert Bobin de Bondoufle, any Fleury atsimon’i Paris (Frantsa). Lalao noentin’ny roa tonta nanomanana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, hotante­rahina any Ejypta amin’ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay ho avy izao, ity notanterahina ity. Ny Barea hifaninana ao amin’ ny vondrona B (misy an’i Nizeria, Guinée ary Burundi), raha ao amin’ny vondrona C (misy an’i Alzeria, Sénégal ary Tanzania) kosa no misy an’i Kenya.
Nandritra ny fizaràm-potoana voalohany dia nanindry ary nanao totoafo ny fanafihany ny Malagasy saingy teo amin’ny famaranana hatrany no nisy lesoka kely teo amin-dry Njiva, Carolus, Rayan ary Faneva Ima. Azo heverina ho efa mirindra kosa ny fiarahana eo amin’i Marco Ilaimaharitra sy Abel Anicet, miampy an-dry Métanire, Mamy Gervais, Jeremy Morel ary Jerôme Mombris. I Leda no napetraka ho mpiandry tsatokazo. Teo amin’ny minitra faha-43 dia nahazo « penalty » tamin’ ny alalan’i Faneva Ima ny Barean’i Madagasikara saingy tsy matin’i Carolus izany, fa voatohan’ny mpiandry tsatokazo kenyana. Teo am-pialan-tsasatra dia nisaraka tsy nisy naratra ny roa tonta.
Teo amin’ny fizaràm-potoana faharoa dia somary nikorontana kely ny lalaon’ny Malagasy. Nampiditra an-dry Paulin, Bolida, Amada, Caloin, Boyer ary William Gros i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly. Teo amin’ny minitra faha-63 dia nahazo “penalty” ihany koa i Kenya ary matin’i Victor Wanyama, mpilalaon’ny Tottenham (Angletera). Andra­sana eto Antananarivo amin’ity faran’ny herinandro ity ny Barean’i Madagasikara.